I-DMX ekhokhelwe ngaphambili kwesibani
Amashubhu we-3D aholwa yi-DMX
Ukukhanya kwe-pixel okuholele ku-DMX
Yiziphi izizathu zokuthi kungani imithombo yokukhanya kwamaphoyinti akhokhelwayo ithandwa?
Izici zomthombo okhanyayo we-LED: 1. Ukusebenza: Kokubili umthombo wokukhanya we-LED kanye nesikrini sokubonisa se-LED kungalawulwa yikhompyutha ukudlulisa imininingwane yokukhangisa ngesikhathi sangempela, ukusakaza ividiyo yokukhangisa, nokufaka okuqukethwe kokukhangisa ngentando. Isibonisi se-LED sine-hig ...
Ngabe zifana ngani izibani eziqondile zomugqa namashubhu okuvikela?
Okokuqala, ukushabalalisa ukushisa, empeleni, kunabantu abaningi abangaqondi ukushabalalisa ukushisa emalambini nasezibani. Abantu abaningi bathinta igobolondo. Lapho-ke noma ngabe igobolondo liyashisa noma cha, kunjalo, ayikho impendulo enengqondo. Impendulo yokugcina yokuthi iyashisa noma cha ukubona iT ...
Yiziphi izimo zokusebenzisa zezibani zezikhukhula ze-LED?
Futhi singabiza amalambu e-LED noma amalambu e-LED. Izibani zezikhukhula ze-LED zilawulwa yi-chip eyakhelwe ngaphakathi. Manje kunezinhlobo ezimbili zemikhiqizo ongakhetha kuzo. Enye iyinhlanganisela yamachips kagesi, kanti Olunye uhlobo lusebenzisa i-chip eyodwa enamandla amakhulu. Uma kuqhathaniswa phakathi kwalaba ababili, eyokuqala izinze kakhudlwana ...
Kunakekelwa kanjani nsuku zonke amalambu ezikhukhula ze-LED?
Empeleni, kumalambu emigwaqo e-LED, akukhona ukuthi siwafakile, futhi asikho isidingo sokuwaphatha. Ukulungiswa nokugcinwa okujwayelekile kuphela okungaqinisekisa isikhathi sokusebenzisa eside. Ngamalambu e-LED, hlanza amalambu ngesikhathi sokusebenzisa ngaphandle. Umsebenzi omkhulu ukubhekana nothuli olungaphezulu. Ku ...
Kungani kufanele umugqa wokukhanya oholelekile unake ukusebenza kahle komthombo wokukhanya?
Inhloso enkulu yamalambu omugqa oholelekile ukushintsha isithombe sasebusuku sehhotela, ukuze isakhiwo sikwazi ukwakhiwa kabusha futhi sakhiwe ebusuku, sikhombise ukuheha nezici ezingeke ziboniswe emini, ukuze kudonse abathengi abaningi. 1, ukusebenza kahle Naka i-efficien ...
Kuthiwani ngokuguquguquka kwamalambu e-LED aqondile?
Isibani somugqa we-LED ngumzimba wesibani we-aluminium odongeni we-LED. Isembozo sokuphela esihlangene nesingasindi kanye nobakaki obandayo wenziwe nge-aluminium alloy ingcindezi ephezulu yokufa okusakaza indandatho yokufaka uphawu lwenjoloba engamelana nokushisa, engenamanzi futhi enokwethenjelwa. Izibani zingaba ...
Uhlobo olunjani lokukhanya umthombo okhanyayo we-LED?
Umthombo wokukhanya kwephoyinti le-LED wuhlobo olusha lokukhanya okuhlobisa, okuyisengezo kumthombo wokukhanya oqondile nokukhanya kwezikhukhula. Izibani ezi-Smart ezingashintsha okunye ukucaciswa kwezikrini zokubonisa ezifeza umphumela wamachashazi nezindawo ngokuxubeka kombala we-pixel. Umthombo okhanyayo wephuzu le-LED ngu ...
Uyini umgomo wezobuchwepheshe we-LED wall washer?
Eminyakeni yamuva nje, i-LED wall washer ibisetshenziswa kabanzi ezindaweni ezahlukahlukene, njengokukhanyiswa kodonga lwenkampani nezakhiwo zebhizinisi, ukukhanyiswa kwezakhiwo zikahulumeni, ukukhanyiswa kodonga lwezakhiwo zomlando, izindawo zokuzijabulisa, njll .; uhla oluhilelekile nalo luyanda ngokuBanzi. Ukusuka...
Iziphi izinguquko ukukhanyiswa kwamabhilidi angaphandle okulethele idolobha?
Uyini umsebenzi wokukhanyisa izakhiwo? Yiziphi izinguquko ukukhanyiswa kwesakhiwo okusilethele zona? Edolobheni lapho kuhlala khona abantu, badle, baphile, futhi bahambe, lesi sakhiwo kungathiwa ngamathambo omuntu nobusuku obunegazi edolobheni, esekela ukusebenza kwedolobha nentuthuko. Njenge-pa eyisihluthulelo ...
Imbangi yemikhiqizo yokukhanyisa ye-LED-ukushabalalisa ukushisa?
Eminyakeni yamuva, ngokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe be-chip ye-LED, ukusetshenziswa kwezentengiselwano kwama-LED sekukhule kakhulu. Imikhiqizo ye-LED yaziwa ngokuthi "yimithombo yokukhanya eluhlaza" ngenxa yobukhulu bayo obuncane, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, impilo yenkonzo ende, ukukhanya okuphezulu, ukuvikela imvelo ...
Incazelo ephelele yezinkomba eziyishumi eziphezulu zekhwalithi yokukhanyisa kwe-LED?
Ikhwalithi yokukhanyisa isho ukuthi umthombo wokukhanyisa uhlangabezana nezinkomba zokukhanyisa njengokusebenza kokubuka, ukunethezeka okubukwayo, ukuphepha, nobuhle obubonakalayo. Ukusetshenziswa okuyikho kwezinkomba zekhwalithi yokukhanyisa kuzoletha umuzwa omusha sha endaweni yakho yokukhanyisa, ikakhulukazi ekukhanyeni kwe-LED ...
Isikhundla samanje: I-Austech Lighting> Isikhungo Sezindaba> Luhlobo luni lokukhanya umthombo okhanyayo we-LED? Uhlobo olunjani lokukhanya umthombo okhanyayo we-LED? Umthombo wokukhanya kwephoyinti le-LED wuhlobo olusha lwesibani sokuhlobisa, okuyisengezo kumthombo wokukhanya oqondile nokukhanya kwezikhukhula. Izibani ezihlakaniphile ...
Dj Lights, Ukukhanya kwePixel Pixel, Ukwakhiwa kwe-Led Facade Led Lighting, Stage Ukukhanyisa, Izibani ze-Dj Facade Led, Amashubhu A-Led A-3d,
Yiziphi izizathu zokuthi kungani ukukhanya kwephoyinti eliholelekile ...
Yini eholele izibani eqondile futhi guardrail t ...
Yiziphi izimo zohlelo lokusebenza lwe-LED ...
Kunjani ukugcinwa kwansuku zonke kwezikhukhula ze-LED ...
Kungani kufanele ukukhanya komugqa okhokhelwayo ukhokhe ...
Amadivayisi: B isakhiwo, Chuangjian umkhakha epaki, Shiyan, Bao'an, Shenzhen China
I-Skype: 0086 15914111145